Bakhetha uJesu bayeke isikole - Ilanga News
Home Izindaba Bakhetha uJesu bayeke isikole
Bakhetha uJesu bayeke isikole
Abazali bathole isibhaxu beyolanda izingane esontweni
SEKUQUBUKE indida ngebandla eliseMkhambathini – phakathi kweTheku no-Mgungundlovu – eligcine inqwaba yabafanyana na-mantombazanyana, abadube imi-
ndeni yabo ngoba kuthiwa sebekhe-the iNkosi.
Sikhulu isililo kubazali bezinye zalezi zingane ngaleli bandla elaziwa ngokuthi yiJerusalem, okuthiwa izingane zishiya isikole zidube ne-mindeni yazo ziyohlala khona ngo-ba kuthiwa zibizwe nguJesu.
Kubikwa ukuthi ezinye izingane sezihlale isikhathi esingaphezu kweminyaka emithathu zikuleli ba-ndla. ILANGA lithole ukuthi uma umuntu efika khona kumele ashiye konke okomhlaba, angaxhumani ngisho nomndeni wakhe, ikakhulukazi uma ungakhonzi kulona.
Ngeledlule, kunomndeni wakwaMotaung, eShongweni Dam, ophu-me ngesamagundane eJerusalem uthi uyolanda amadodana awo amabili – eneminyaka ewu-16 ne-newu-19 ubudala. ILANGA lithole ukuthi lo mndeni uthelekelwe nge-nduku ngamakholwa aleli bandla emuva kokuba usuzame kaningi ukutshela umholi walo, uMfu Maphumulo (igama lakhe elinga-tholakalanga) ukuba adedele izi-ngane.
Uthi uMfu Maphumulo ubevele awubuze ukuthi wona uxakwa yini uma izingane ziphendula ubizo lu-kaNkulunkulu. Okucasula kakhulu lo mndeni wukuthi lezi zingane se-zishiye isikole zayohlala eJerusalem kanti noMfu Maphumulo kuthiwa akazikhuzi ngalokhu njengoba kuthiwa wumgomo wakhona ukuthi ilungu lebandla liyeke izinto zo-mhlaba uma selikhonza khona.
ILANGA livakashele eJerusalem ngoLwesibili lafica inqwaba yaba-ntu – ehlala khona – elinganiselwa ngaphezu kuka-50, iyaluza egceke-ni. Kuhlangene, abesilisa nabesifa-zane abadala nabancane.
Lichazeliwe nangemithetho ya-khona okuhlanganisa nokungawuphathi umakhalekhukhwini nemali uma ungaphakathi kanti kawuvunyelwe nokuphumela ngaphandle kwesango.
UNkk Sizakele Motaung (ocele ukusebenzisa isibongo sakubo nge-nxa yezizathu ezithile), uthi uqale ukuzwa ngaleli bandla ngo-2014 ngesikhathi enenkinga nendodana yakhe ebidla izidakamizwa.
“Izingane zami bezijwayele uku-ya kuleli bandla emuva kokuba umfowabo omdala esizakale khona ngokuyeka izidakamizwa. Nami be-ngiya khona uma ngithola isikhathi ngoba ngeseka izingane.
“Ngiqale ukuxwaya ngenxa yezi-nye izinto ebezikhulunywa kuleli bandla njengokuthi kuzomele ngi-shiye umshado wami ngoba kawuveli ezulwini, ngavele ngashiya phansi ukuya kuleli bandla.
“Izingane beseziqala ukungala-wuleki, zingasahloniphi. Kuthe ngePhasika kulo nyaka, zahamba izi-ngane zami zaya khona ngoba zithi ziya enkonzweni zizobuya. Kuha-mbe isikhathi zingabuyi ekhaya.
“Kuthe ngingazelele, ngathola ucingo luvela esikoleni lapho lona omdala enza khona imfundo epha-keme, bengitshela ukuthi sekunamasonto amabili engayi khona.
“Ngishayele uninakhulu ucingo ngizitshela ukuthi uku-yena, naye wamlandula.
“Ngisha-yele umama mfundisi wavuma ukuthi ukhona kodwa wangitshela ukuthi indo-dana yami isikhethe ukulandela ubizo lwayo, ngeke isabu-ya.
“Lona omncane weqile ekha-ya waya ku-lona kuleli bandla. Nakhona lapho ngifonele umfu-ndisi nga-mcela uku-ba adedele izingane, wangibuza ukuthi mina ngixakwa yini ngoba izingane zibizwe nguNkulunkulu.
“NgoLwesine (olwedlule) siye khona nobaba wekhaya sithi siyola-nda izingane, safike sazitshela ukuthi maziqoqe izimpahla zazo siyahamba, zenqaba ngoba zithi mina kangisazizali kwazise kangilandeli inkolo yazo, ngiyinto yasemhlabeni.
“Ngidonse lona omncane ngengalo ngoba ngifuna ukuyomfaka
emotweni, kwavele kwaqhamuka iqulu labafanyana elikhonza kuleli bandla lasingenela ngenduku. Badonsele ubaba ngaphandle ba- mgxoba waze waphuka engalweni,” kusho yena.
Omunye umzali ongumakhelwa-ne nomndeni kaNkk Motaung – oce-le ukungadalulwa – uthe indodana yakhe eneminyaka ewu-17 isikhe-the ukuyohlala kuleli bandla yize ifunda umatikuletsheni.
“Ngikhathazekile kakhulu ngale nto ngoba indodana yami kulo nya-ka yenza umatikuletsheni, ihambe neyakwamakhelwane ingumuntu ozobuya, ngethukile uma sengizwa imikhuba eyenzeka kuleli bandla,” kusho yena.
Ethintwa uMfu Maphumulo – uthe inkinga kaNkk Motaung wukuthi ugxajelwa yikhanda, akafuni
kuhlalwe phansi kuboniswane. Uthe izingane zikaNkk Motaung ziye eJerusalem engafuni ziye bezimtshela ukuthi zifuna ukula-ndela inkosi, zihlukane nomkhuba wokubhema izidakamizwa.
“Enye yamadodana akhe ikhale ngokuthi kunesihlobo sayo ebesesi-qale umkhuba wokusidayisisa izi-dakamizwa yabaleka yakhetha ukuzohlala nathi ebandleni.
“Ngesikhathi befika lapha ekha-ya, balwise izingane, umyeni wakhe wagcina eklinya eyodwa yazo. izi-nceku zibe se-zingenelela ngoba zi-lamula kodwa wazishaya. Kube se-kududulwana wanyela,” kusho yena.
Uthi isixazululo kulolu daba wu-kuba uNkk Motaung avumele izi-ngane zilandele uNkulunkulu ngoba kaziphoqiwe ukuhlala
Silobe izolo amaphoyisa ephele-zela uNkk Motaung ukuyolanda izi-ngane zakhe. ILANGA lithole ukuthi ziphinde zabaleka emuva kokuba zinikezwe imali kuleli bandla yokuba zibuyele esontweni.
Leli phephandaba liphinde la-bikelwa ukuthi emuva kokuba li-khulume noMfu Maphumulo, upha-zamile wahlanekezela inkulumo etshela umndeni kaNkk Motaung ukuthi leli phephandaba liyavu-melana nesenzo sakhe sokugcina izingane kuleli bandla.
Previous article“Ubulale” intombi walahla isidumbu sayo emfuleni
Next articleAbase-USA bafundiswe ngamasiko